6 Waxyaabood Oo Ay Tahay In Nin Kasta Uu Sameeyo Si Xaaskiisa Udareensiiyo Kalgacayl & Qadarin | Aayaha
6 Waxyaabood Oo Ay Tahay In Nin Kasta Uu Sameeyo Si Xaaskiisa Udareensiiyo Kalgacayl & Qadarin
Aayaha editorDecember 6, 2018
Shabakadda Aayaha Online, ayaa waxa ay idiin soo gudbineysaa 6 oo waajib ku ah in nin kasta uu sameeyo si haweeneydiisa u dareensiiyo kalgacayl.
1. Usheeg inaad jeceshahay
Mararka qaar ka rag ahaan, aad Ayaan ugu raaxeysanaa xiriirkayaga mana aragno baahida loo qabo in aan u sheegno lammaanahayaga inaan jecelnahay laakiin taasi waa qalad. Haweenku waxay jecel yihiin inay maqlaan saddex eray oo gaar ah oo ka socda ninka ay jeceshahay.
2. Daryeel gacalisadaada/xaaskaaga
Hubaal waxaa ah inaad dareensiin doonto kalgacayl haddii aad daryeesho markeey u baahantahay daryeel. Markaad daryeesho lamaantaada markay ubaahantahay, sidoo kale ayay kuu sameyneysaa markaad adigana u baahantahay.
3. Haka mashquulin
Waan ogahay jadwalkaaga inuu yahay mid daran balse mararka qaar inaad waqti usameyso waxay tuseysaa inaad mudnaan siineyso waxayna dareemeysaa jacayl dhab ah/
4. Udir farriimo jacayl
Waxaa dareensiisay inay kugu weyntahay markaad u dirto farriimo jacayl inta lagu guda jiro xilliga aad shaqada joogto. Tani waxay tuseysaa inay qalbiga kaaga jirto.
5. Ku dhiiri geli in riyooyinkeeda ay ka guul gaarto
Inaad noqoto garab keeda ugu weyn waxay tuseysaa jacaylka dhabta ah ee aad u qabto. Ku dhiiri geli inay ka guul gaarto riyooyinkeeda adigoo siinaya kalsoonida ay u baahantahay si ay riyooyinkeeda uga dhabeyso.
Lamaantaada waxay u baahantahay ammaan markaad ammaanto waxay dareemeysaa inaad ka heshay oo aad jeceshahay ha fududeysan in gacalisadaada aad u sheegto had iyo jeer waxyaabaha aad ku jeceshahay kalsooni iyo dhoolla cadeyn ayay ka qaadeysaa.
3 Astaamood Oo Lagu Garto Gabadha Waqtiga Kaa Lumineyso
3 Calaamadood Oo Lagu Garto Marka Ninka Uu Gabi Ahaanba Ku Nacay
Waxyaabo Macaan Oo Lagu Dhaho Qofkaad Jeceshahay Markaad U Xiisto
How To Update Your Skincare Routine For Autumn
8 Waxyaabood oo haweeney waliba ay ka dooneyso ninka ay rabto
Farriimo Jacayl Oo Qiimo Leh
3 Qaabood Oo Loo Caawiyo Xaaskaaga Markay Canug Dhasho, Loogana Dhigo Mid Waligaa Ku Jecel
Raga Oo Aad U Jecel Haweenka Noocaan Ah & 5 Arimood Oo Sabab U Ah